ओलीले अदालतलाई धम्क्याउन थालेको प्रचण्डको आरोप – Ramailo Sandesh
उनले अघि भने, ‘१४९ जनाको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कहाँ छ, १४६ जनाको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा ! अनि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनु पर्दैन ?’
संविधानको धारा ७६(५) सांसदहरुको विशेषाधिकारका रुपमा राखिएको भन्दै प्रचण्डले अदालतले संविधान अनुसार निर्णय गर्छ भन्ने विश्वास रहेको बताए । उनले अघि भने, ‘केपी अहिले पनि अदालतलाई धम्क्याउन थालेका छन्, थर्काउन थालेका छन् । ’
‘कहिले महान्यायाधिवक्ताबाट थर्काउन लगाउने, अहिले त आफैं । विचरा मलाई देखाएर, मैले सेटिङ गरेँ रे ? मेरो सेटिङमा नेपाल चलेको भए त ‍‍‍‘?’ प्रचण्डले भने ।